सामसु'sको Exynos 8895 27 40 ch चिप २%% बढी शक्तिशाली र %०% कम उर्जा खपत गर्ने छ Androidsis
Exynos 8895 चिप सामसु by द्वारा निर्मित र Exynos9श्रृंखला प्रोसेसरको सम्बन्धित छ, यो पहिले नै एक विशाल तरिकामा उत्पादन भइरहेको छ.
यो नयाँ Exynos 8895 8 8 ch चिप, जो आगामी ग्यालेक्सी S10 वा ग्यालक्सी SXNUMX Plus को एक संस्करणमा पहिलो पटक राखिएको हुन सक्छ, आठ कोरहरू सुविधा प्रदान गर्दछ र सामसु fromबाट पहिलो हो जसले १०-नानोमिटर (एनएम) FinFET प्रक्रिया टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ, जुन त्यो 27०% कम उर्जा खपत गर्दा २ 40% सम्मको प्रदर्शन प्रस्ताव गर्न अनुमति दिनेछ पुरानो 14nm टेक्नोलोजीको तुलनामा।
जबकि हामी मध्ये केही पूर्ण रूपमा हराउँछौं जब यो प्राविधिक पक्ष खोत्न आउँदछ, Exynos 8895 XNUMX XNUMX it लाई प्राप्त गर्न सजिलो बनाउनु पर्छ। छिटो LTE कनेक्शन गति तथ्य यो छ कि यसले एक गीगाबिट मोडेम एकीकृत गर्दछ जसले car क्यारियर एकत्रीकरण (CA सीए) लाई समर्थन गर्दछ - CA १ जीबीपीएस डाउनलिंक (क्याट १5) 1 सीए अपलिंकको साथ र १ M० एमबीपीएस (क्याट १16) २ सीए »को साथ प्रदान गर्दछ, सामसु byद्वारा प्रदान गरिएको जानकारी.
तर Exynos 8895 XNUMX XNUMX more ले मात्र बढी वेग र शक्ति प्रदान गर्दैन, यसले गर्दछ यसले 'अर्को स्तर' ग्राफिक्स प्रदर्शन प्रदान गर्दछ, 4K VR को कम विलम्बता सहित, यसको माली- G71 GPU लाई धन्यवाद। दक्षिण कोरियाली कम्पनीका अनुसार, नयाँ चिपले 60 8895 XNUMX of को उन्नत मल्टी-फर्म्याट एन्कोडर (MFC) पछि उसको पूर्ववर्ती भन्दा %०% राम्रो प्रदर्शन गर्दछ। तपाईंलाई4fps मा 120K सम्म भिडियो सामग्री रेकर्ड गर्न र प्ले गर्न अनुमति दिन्छ.
यसमा पनि समावेश छ २ MP MP क्यामेराको लागि समर्थन र डुअल छवि सिग्नल प्रोसेसर जसले "DSLR जस्तो फोटोग्राफी अनुभव सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ," सामसु says भन्छ। राम्रो सुरक्षा सुविधाहरू, र AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) को लागी र यसका आवश्यक विवरणहरूको वरिपरि सिक्नको लागि राम्रो संरचना।
सामसु'sको नयाँ चिप क्वालकॉमको स्नैपड्रैगन 835 with सँग सामना गर्नेछ, जुन यस वर्षको पछि आइपुग्छ, दुबै ग्यालेक्सी एस series श्रृंखलाको विभिन्न संस्करणहरूमा फेला पर्नेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » हाम्रो बारेमा » सामसु'sको Exynos 8895 27 40 ch चिप २%% बढी शक्तिशाली र %०% कम पावर उपभोग गर्दछ
के त्यहाँ यसलाई compare and? र अन्यसँग तुलना गर्न डाटा छ?